मुख्य पक्षहरू: तपाईं SVG-फाइलहरू खोल्न
धेरै केही प्रयोगकर्ताहरू विस्तारसँग फाइलहरू सामना: .svg, र सबै भन्दा अवस्थामा केही, तर लगभग सबै, प्रयोगकर्ताहरूले यस्ता फाइलहरू, तिनीहरूले भन्न रूपमा, indiscriminately, बिल्कुल कार्यक्रम मूल SVG फाइल म्याप थियो के सोचिरहेका छैन मेटाउन कुरा हो। अब हामी कसरी स्रोतहरू सम्पादन गर्नका लागि फाइल खोल्न सक्दैन बारेमा बोल्न र सामान्य मा, यो के गर्न चाहे।
खुला तपाईं: .svg विस्तार?
पहिलो, सरल अवधारणाहरु विचार गर्नुहोस्। खुला SVG-फाइल गलत समझ बैठी रहन सक्छ बारेमा uninitiated प्रयोगकर्ताको प्रश्न लागि। यो यस प्रकारको मौलिक फाइलहरू रेखापुंज वा सदिश मोड परिवर्तन संग ग्राफिक्स ह्यान्डल गर्न डिजाइन भनेर याद गर्न लायक छ। यो कुरा मा अन्त-प्रयोगकर्ता भने, तिनीहरूले भन्न रूपमा, एक layman, त्यसपछि उहाँले व्याख्या गर्न केही छ।
दर्शक बाँकी लागि, हामी समस्या नै, तपाईं प्रायजसो मात्र उपयुक्त आवेदन, पूर्वनिर्धारित वा जस्तै को विकल्प संग सम्बन्धित मा, SVG-ढाँचा खोल्ने भनेर याद गर्नुहोस्।
तपाईं पूर्वनिर्धारित SVG-फाइलहरू खोल्न?
तपाईं थाह छ, कुनै पनि प्रकारको फाइल खोल्न सजिलो तरिका सामान्य मा एक डबल-क्लिक छ "एक्सप्लोरर।" यस मामला मा, सञ्चालन प्रणाली नै (यस मामला विन्डोज) यसको सेट निर्दिष्ट फाइल प्रकार खोल्न गर्न प्रयोग गरिनेछ देखि यो अर्थ के परिभाषित। यस मामला मा, SVG-फाइल, वास्तवमा, छ सार्वभौमिक।
अनिवार्य समर्थन मानक मापनयोग्यभेक्टरग्राफिक्स, वास्तवमा, कटौती भयो जहाँ कुनै पनि कार्यक्रम, यो संग कुनै पनि समस्या बिना काम गर्न सक्छन्। सिद्धान्त मा, एउटै प्याकेज Adobe Illustrator वा corel कोर्नुहोस् नवीनतम संस्करण वा यस्तै सफ्टवेयर प्याकेजहरू यस प्रकार को फाइलहरू प्रक्रिया गर्न सक्षम छन्। स्थापित अनुप्रयोगहरू भने, समस्या उत्पन्न हुँदैन।
तर तपाईंले केही सरल सानो उपकरण प्रकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने "maykrosoftsofskogo» रंग, रंग .NET वा सम्पादक अप माईक्रोसफ्ट अफिस को कोर कुनै पनि संस्करण बनाउन र जारी, त्यसपछि विशेष कुरा म गणना सामान्य सक्दैन। तिनीहरूले यस्तो डाटा काम गर्न सक्छन्, तर सधैं, सम्पादन गर्नका लागि सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो। SVG फाइल तिनीहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ।
सबै भन्दा राम्रो मामला मा, तपाईं बस, छवि हेर्न सक्नुहुन्छ पानामा, एक सानो "सम्पादन" रंग वा संतृप्ति यसको स्थिति परिवर्तन गर्न, तर यो (वा खराब) थियो अन्यथा सबै रहनेछ। गरेको यो हेर्न प्रयास गरौं, तपाईं सँगैको सफ्टवेयर र आवेदन प्रयोग गरेर सम्पादन को मामला मा SVG-फाइल खोल्न।
SVG ढाँचा डाटा प्रोसेसिंग हालतमा
रूपमा अचम्मको यसलाई सुनिन्छ रूपमा, तर यो नै .svg विस्तार कुनै सम्बन्धन छ विश्वास छ यस अर्थमा यो मानिन्छ हुनत मापनयोग्य ग्राफिक्स ढाँचा, तुलना कार्यक्रम। तपाईं SVG-फाइल विशेष महत्त्वपूर्ण छ खोल्न। सिद्धान्त मा, स्थापित सफ्टवेयर आवेदन र अपरेटिङ प्रणाली को पर्याप्त रकम तपाईं सबैभन्दा उपयुक्त आवेदन (कुनै पनि एडोब प्याकेज भेरिएसनहरूमा रंग, corel, आदि) चयन गर्न शीघ्र हुनेछ।
यहाँ, खैर, एउटै समस्या छ कि, SVG-फाइल सिक्का को उल्टो पक्ष छ तपाईं खोल्न रूपमा भूल छैन कि साथ। फाइल यी प्रकार HTML मार्कअप वा XML समावेश गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले यस्तो डाटा सम्पादन विशेष उपकरण को मद्दतले आवश्यक छ।
सामान्य मा, हामी यो प्रश्न मूल्याङ्कन भने, त्यसैले बोल्न, वैश्विक मामलामा, यो खोल्ने भनेर उल्लेख हुन सक्छ फाइल ढाँचा SVG पारंपरिक अवधारणाहरु परे जान गर्दैन।
प्रारूप नै र concomitant विस्तार विशेष सम्पादक को उपस्थिति, र थप अपरेटिङ सिस्टम को चार्ट उल्लेख किनभने, र यसैले अवलोकनका लागि खोल्ने र सम्पादन क्षमता सुरुमा प्रदान र बिना यो, बुझ्ने छ।
सामान्य मा, हामी मात्र ग्राहकहरु को विश्वव्यापी ACDSee प्रकार, वा जस्तो कुरा, प्राथमिक तहमा SVG फाइल पहिचान गर्न मात्र सक्षम छन् छैन जो (प्रारम्भ, म्यापिङ आवेदन, दर्शकहरु, आदि) को स्थापना सल्लाह गर्न सक्छन्, तर पनि पूर्ण मोडमा उहाँलाई काम गर्न सम्पादन, जो को प्रयोग पनि फाइलको धेरै संरचना परिवर्तन हुन सक्छ। यो अर्थमा मा, SVG-ढाँचा फाइल पनि विशेषताहरु कुनै पनि आन्तरिक बाह्य परिवर्तनहरू कायम राख्न सक्छौं।
एक भ्रष्ट शब्द कसरी खोल्न बारेमा विवरण (फाइल)
Conhost.exe - सिस्टम प्रक्रिया वा भाइरस?
गाइड: कसरी नाम बिना फोल्डर बनाउन
मिथुन - बच्चा को राशिफल, महिला, मानिस
फ्रान्सेली गोल रक्षक Benua Kostil
रबर रूख - लेटेक्स र उच्च गुणस्तरीय काठ को स्रोत
को ताराहरु मार्च: Astronomical घटनाक्रम भेनिस